यसलाई बिंग गर्नुहोस्! | Martech Zone
यसलाई बिंग गर्नुहोस्!
बिहीबार, जुन 4, 2009 शनिबार, अप्रिल 16, 2016 Douglas Karr
माइक्रोसफ्टले एक शब्दको साथ गुगल हेड लिइरहेको छ जुन खोजी र गुगल = प्रासंगिकताको पर्यायवाची भएको छ। यहाँ छ पहिलो वाणिज्यिक जुन माइक्रोसफ्ट चलिरहेको छ.
मलाई आशा छ कि माइक्रोसफ्टले आक्रामकताका साथ गुगल लाई चुनौती दिन सक्छ बिंग। पछिल्लो केहि दिनहरू, मैले यसलाई मेरो पूर्वनिर्धारित खोज ईन्जिनको रूपमा प्रयोग गरें, र मैले सान्दर्भिक परिणामहरू पाइरहेको छु - त्यो खेलको नाम हो।
खोज इञ्जिन मार्केटिंग उद्योगलाई हेरेर, गुगलले खोज के हो परिभाषित गर्ने उत्कृष्ट कार्य गर्‍यो तर हाम्रो ब्यबहार र स्वीकृतिलाई लामो अवधिमा परिमार्जन गर्ने। हामी सबै अब कुञ्जीशब्द संयोजनमा केन्द्रित छौं - र हामी परिणाम दिन्छौं र प्रयास गर्दा पुनः प्रयास गर्नुहोस्। उल्टो पक्षमा, खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन कम्पनीहरूले उनीहरूका कम्पनीहरूले मात्र बाध्यकारी सामग्री लेख्नुको सट्टा ब्याकलिinking्क अभियानहरू मार्फत प्रणाली खेल गर्न खराबी गरिरहेका छन्। ब्याकलिinking्क गुगलमा प्रासंगिकता विकृत गर्दै छ र केहि राम्रो परिणामको लागि उत्तम प्लेसमेन्ट प्राप्त गर्न असम्भव बनाइरहेको छ।
एकातिर, म बुझ्छु कि शब्दहरू जुन व्यक्ति खोजी गर्न प्रयोग गर्दछ शब्दहरू समान छैनन् जुन व्यवसायहरू फेला पार्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ; जे होस्, खोजी बिस्तारै अनुकूलित हुनुपर्दछ र ती मुद्दाहरूलाई पार गर्नुपर्दछ। यदि म खोज्छु महान दन्त चिकित्सक, किन म वरिपरि दंत चिकित्सकहरूको साथ परिणाम पृष्ठमा राखिएको छैन जुन केहि स्रोतहरूबाट सकारात्मक समीक्षाहरू छन् # १ रैंक गर्न?
यसको सट्टामा, म केवल निर्देशिकाहरू, र राष्ट्रिय दंत चिकित्सकहरू फेला पार्दछ किनकि उनीहरूले पृष्ठ शीर्षक, सामग्री, र ब्याकलिंक्समा कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोग गर्थे। त्यो सान्दर्भिक प्रतिक्रिया होईन। (बिंगले यसलाई न n गर्दैन, कि त)। यो केवल एक लागू गर्न कत्ति गाह्रो हुन्छ भौगोलिक-आईपी डाटाबेस र स्थानीय परिणामहरूको साथ खोजी परिणामहरू मिलाउने पनि हो?
यो समय छिटो चलाखीपूर्ण भयो, र म आशा गर्छु कि बीचको प्रतिस्पर्धा बिंग र गुगल इन्टरनेट मा समग्र खोज अनुभव सुधार गर्दछ।
टैग: bingबिंग वाणिज्यिकMicrosoftओभरलोड खोज्नुहोस्
इष्टतम वेब पृष्ठ चौड़ाई के हो?
जुन 5, 2009 मा 10: 40 PM
BING को बारेमा हेड अप को लागी धन्यवाद, मलाई अहिलेसम्म यसको बारेमा थाहा थिएन। मैले केहि वेबसाइटहरू पेश गरेको छु, र आश्चर्यचकित छु कि यसले मलाई कुनै अतिरिक्त ट्राफिक ल्याउनेछ। (मसँग साइटहरूमा Google विश्लेषणहरू छन्, मलाई थाहा छैन यदि BING बाट कुनै ट्राफिक आउँदैछ भने यसले मलाई बताउनेछ।)
म प्रतिस्पर्धाको बारेमा टिप्पणीलाई दोश्रो गर्छु, हुनसक्छ खोजको बुद्धिमत्ता सुधार गर्न मद्दत गर्दछ, जुन प्राविधिक रूपमा सम्भव भएमा धेरै पछाडि रहेको देखिन्छ।